Taageerada Xukuumadda Cusub ee Soomaaliya. - Anti Tribalism Movement : The ATM
Taageerada Xukuumadda Cusub ee Soomaaliya.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) waxay u hambalyeynayaan xubnaha cusub ee Gollaha Wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya. Waxaan sidoo kale u hambalyaynaynaa shacabka Soomaaliyeed oo muujiyay dulqaad si looga gudbo arrimihii hortaagnaa ansixinta xukuumadda cusub.
Waxa aan xukuumadda cusub ee Ra’isul Wasaare Cumar C/rashiid Sharma’Arke aan Illaahay uga baryaynaa inay ku guuleysto howsha adag ee hortaala. Waxaan aaminsanahay in dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay joogaan ay xukuumadda cusub ka sugayaan sidii ay dalka uga gudbin laheyd xaaladda uu marayo.
Waxa aan wasiiradda xukuumadda cusub ka codsaneynaa inay ka hortagaan Qabyaaladda, inay dhisaan wasaarado ku shaqeeya nidaam cadaalad ah, in la horumariyo tayada wax-barashada iyo caafimaadka ee guud ahaan dalka, in la isku xiro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool deegaanada iyo gobolada dalka, in la sameeyo dib u heshiisiin dhab ah iyo hirgellinta barnaamijyo wacyigallin ah oo ay bahda warbaahintu, fanka iyo suugaanta, Isboortiga, waxgaradka iyo culumaa’udiinku ay hormuud ka yihiin.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda waxa ay mar waliba kaalin muuqata ka qaadan doonaan barnaamijyada danta guud ee dib loogu dhisayo dalka, isla markaana aas-aaska u ah mustaqbalka caruurta Soomaaliyeed. Waxaan si gaar ah dowladda Soomaaliya uga codsaneynaa inay taageera buuxda oo dhinac waliba ah ay la garab istaagaan ciidamada Qaranka Soomaaliya si loo helo amni buuxa oo ka jira gudaha dalka Soomaaliya.
Waaxda Warbaahinta ee Kacdoonka.